UBukumkani BukaThixo Buyeza Kungekudala! Sele ulungele? - jwjw.org
Yiya kuLuhlu lweMixholo
UBukumkani BukaThixo Buyeza Kungekudala! Sele ulungele?
Izenzo eziphambili ngaphandle
ukungena Iphepha langaphambili
Okulandelayo ukungena: Contents
Isihloko esiphambili sePosi
I-Post Header Ngaphandle
Ipapashiwe ipapashiwe, ilungisiwe
Umhla oPapashiweyo woMhla kunye neSitampu seXesha
Thumela uMhla oGuquliweyo kunye neSitampu sexesha
Ipapashwe nguMbhali wePosi
Amagqabantshintshi eSenzo Snippet
Ukunika ingxelo kukhubazekile.
Njengokuba amaxesha esiya edideka kwabaninzi, iLizwi likaThixo liyi-whaAbantu kufuneka bajonge kubo. Sisibane esikhanyayo senyaniso esinokunceda abantu balungelelanise unqulo lwabo kuSomandla.
Baninzi abantu nemibutho efuna abantu bajonge kubo, besithi baxhaswa nguThixo kwaye benza imiqondiso enamandla. Kodwa abantu bokwenene bakaThixo abayi kukhohliswa. Ilizwi lomntu likhokelela ekuphelelweni lithemba. UYeremiya 10: 23
Abathandi bakaThixo baya kuhlala bejonga kwimiyalezo kaThixo ukuze baqiniseke kwaye babakhokele. Le sayithi inceda abantu ukuba bahlole iinkolelo zabo kwaye bahlengahlengise unqulo lwabo, ukuba luyimfuneko, ukuze babe nolwalamano olungcono noSomandla. IZenzo 17: 11-12
Ngaba uziva ngathi akukho mfuneko yokuba ujonge iinkolelo zakho? Yiloo nto kanye umchasi omkhulu USomandla ufuna ukuba ucinge. Ufuna abantu balandele ilizwi lomntu kunelikaThixo. Ukuzithemba kunokuba yingozi.
Kwixesha lokugqibela lamaxesha eeNtlanga, ekwabizwa ngabantu abaninzi “njengexesha lokuphela,” kuyakubakho ukuvuka ngokomoya nokucocwa kwiimfundiso ezigwenxa. Nangona kunjalo, ukuze uhlanjululwe ngokomoya, umntu kufuneka aqonde iinyaniso zebhayibhile ezichanekileyo ezivela kuThixo kuneemfundiso ezigwenxa nezijijekileyo ezivela ebantwini. Ngokusa ingqalelo kwizibhalo eziphefumlelweyo zikaThixo, le ndawo inceda abafuna inyaniso ukuba benze njalo nangaphezulu! 2 Timothy 3: 16-17
Zive ukhululekile ukujonga la mabali eBhayibhile kunye nezihloko zilandelayo. Zive ukhululekile ukuba uphawule (Sebenzisa igama lesiteketiso ukuba uyafuna) kwaye wenze uphando ngengqondo akunike yona uThixo. Khumbula, nguThixo onika ubulumko bokwenene. Hayi umntu. Ukufuna inyani evela kuThixo yinto entle ukuba uyenze. Njengakumhla kaYesu, imibutho emininzi yonqulo ifaka uloyiko okanye ukungakhathali kumalungu ayo ukuze ingabathandi. Kodwa ukuba umbutho ukholelwa ukuba banayo inyani, akufuneki kubekho loyiko ekuvavanyeni iimfundiso zabo kuba bekungangqinwa ukuba baphosisile. Ke kutheni le nto imibutho emininzi yonqulo ithintela amalungu ayo ekufuneni inyaniso kaThixo? Bayoyika ngakumbi ukukhusela umbutho wabo emva koko bafuna inyaniso kaThixo! Uthando lwabo ngentlangano yabo lomelele ngaphezu kothando lwabo ngoThixo. Ndiyathemba ukuba umthanda uThixo ngaphezu kwakhe nawuphi na umntu okanye umbutho ongafezekanga. Kwanga ukusikeleleka kwakho kunokusikeleleka! Iindumiso 119: 167- 120: 2 ;Matthew 6: 33
UBukumkani BukaThixo Buyeza Kungekudala! Sele ulungele? © 2021 Umfaki sicelo nguDysineLab
Yiya kuQala lokuKhangela
Umqondiso wotolo Utolo Uphawu lomfanekiso I-Icon ye-Arrow 2 Khangela Icon Gxotha i-icon Icon yeBurger Ngakumbi i-Icon Utolo oluya ezantsi